Turkiga oo 70% hubkiisa isagu samaysan kara & Erdoğan oo sheegay arrin ay damacsan yihiin 5 sano gudohood | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga oo 70% hubkiisa isagu samaysan kara & Erdoğan oo sheegay arrin...
Turkiga oo 70% hubkiisa isagu samaysan kara & Erdoğan oo sheegay arrin ay damacsan yihiin 5 sano gudohood
(Istanbul) 23 Agoosto 2020 – Turkiga ayaa doonaysa inay yeeshaan wax soo saar dhanka daafaca ah oo gebi ahaanba ka madax bannaan kaalmo dibadeed sida uu ballan qaaday MW Recep Tayyip Erdoğan oo mar dhow hadlayey.
Erdoğan, oo ka hadlayey munaasabad Ciidamada Badda lagula wareejinayey agab cusub oo Turki samee ah taasoo lagu qabtay Tuzla oo Istanbul ku taallla laguna dhiso maraakiibta dagaalka iyo kuwa rayidka ayaa sheegay inay hadda dhanka samaysiga agabka ciidamada iskaga filan yihiin ku dhowaad 70% oo ay 10 sano oo qura ku gaareen, balse ay doonayaan inay gaaraan 100%.
Turkey ayaa hadda ka mid ah 10-ka dal ee caalamka oo idil naqshadayn kara isla markaana dhisi kara maraakiibta dagaalka oo ay ku jiraan kuwa dayuuradaha xambaara oo ay hadda dhisme ku wadaan.
Erdoğan ayaa sheegay inay mashaariic intaa ka qoto dheer soo wadaan 5-ta sanadood ee soo aaddan.
TCG Kınalıada, waa markabkii 4-aad oo ah nooca frigate oo lagu dhisay mashruuca MILGEM
Previous articleLoollanka DF Somalia vs Puntland-Jubaland yaa lugta iska toogtey?
Next articleHalista kasoo socoto siyaasadda gurracan ee AFRICOM (Qaybtii 4-aad maqaal xog warran ah)